5 Ndị ọzọ dị na Playlọ Ahịa Google na otu esi eji ha eme ihe | Gam akporosis
N'oge na-adịbeghị anya enwere okwu na Google ga-akwụ ụgwọ maka gụnyere Storelọ Ahịa Play na ọrụ ya na njedebe gam akporo a na-ere na mpaghara Europe, ezigbo akụkọ enyere ezi nha ahuru nke ejiri mmanye otutu ndi mmadu wee kwuo. Nke a emeela na-adịghị anya dị anya anyị pụrụ ịhụ gam akporo ndụdụ na echichi nke ọzọ na-echekwa na Google Play Store.
Ọ bụ ya mere na n'ihi na achọrọ m ka ị mara ụfọdụ ahịa nke ngwa na egwuregwu, na taa m na-ewetara gị ihe ndị a 5 ndị ​​ọzọ na Google Play Store na ị nwere ike iji site ugbu a na ngwaọrụ gam akporo gị.
1 Ikpachara anya na akaụntụ tupu ịwụnye ngwa ebudatara na ụlọ ahịa ndị ọzọ
2 5 Alternatives na Google Play Store
2.1 Applọ Ahịa Amazon
2.4 Mirror APK
2.5 Ndụ ọjọọ
Ikpachara anya na akaụntụ tupu ịwụnye ngwa ebudatara na ụlọ ahịa ndị ọzọ
Ọ dị ezigbo mkpa na ị maara na ibe weebụ ndị a ma ọ bụ ngwa maka gam akporo na anyị ga-akwado gị taa, a na-ewere ha niile dị ka ebe nchekwa na saịtị na-enweghị nsogbuIhe ọzọ bu faịlị na ụdị apk nke anyị nwere ike ibudata na ha, ya bụ, ngwa na egwuregwu anyị na - ebudata site na ụlọ ahịa ndị a gaa na Playlọ Ahịa Google.
Ọ bụ na nke a mgbe anyị ga - enwe otu puku anya, na tupu ịwụnye ihe ọ bụla ma ọlị, soro usoro ndị a dị mfe nke m kwadoro na vidiyo agbakwunyere na m hapụrụ naanị n'elu usoro ndị a.
Prefọdụ nlezianya anyị nwere ike ichikọta na ndị a ihe nchekwa mgbe ị na-etinye apks:
- Enyela ikike maka nrụnye akpaka ma ọ bụ melite ngwa site na ụlọ ahịa ndị ọzọ na Playlọ Ahịa Google - Etinyela ngwa ebudatara na ụlọ ahịa ndị ọzọ ozugbo - Na-eme ngwa nyocha nke ngwa ahụ tupu echichi ya site na ebe nrụọrụ weebụ Virustotal.com
N'iburu ihe a niile n'uche ma buru oke n'uche, anyị nwere ike ịga n'ihu ịkwado ndị a 5 ndị ​​ọzọ na Google Play Store ihe mere depụta n'okpuru
Nke mbụ, gwa gị na usoro nke m na-eweta usoro ndị a na Playlọ Ahịa Google enweghị ihe jikọrọ ya na ogo nke ọ bụla n'ime Ahịa ndị ọzọ na-ewetara anyị.
Site na nke a, m na-ekwu na nhọrọ nke mbụ dị ka nke ikpeazụ nke ndị ọzọ na Playlọ Ahịa Google Play nke m ga-edepụta n'okpuru, Naanị ị ga-ahọrọ nhọrọ ma ọ bụ nhọrọ ga-adabara mkpa gị..
Applọ Ahịa Amazon
El Applọ Ahịa Amazon Ọ bụ kpochapụwo n'etiti ndị ọzọ na Playlọ Ahịa Google, nke ochie mara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ gam akporo niile na ụlọ ahịa na-abịa na-agbakwunye na Kindle ọnụ nke nnukwu ụlọ ahịa ịntanetị.
Ngwa na imewe nke di ka Amazon na mgbakwunye na inwe ike ichota ezigbo katalọgụ nke ngwa na egwuregwu, ma akwụ ụgwọ na n'efu, anyị nwekwara ike irite mkpụrụ ego iji gbapụta maka mbelata ego na Amazon ma ọ bụ na stlọ Ahịa Amazon.
Budata Amazon Appstore site na ịpị ebe a
Ngwa nke abụọ m na-ewetara gị na vidiyo m hapụrụ gị na mbido akwụkwọ a, bụ ngwa ahụ F-Droid, ụlọ ahịa ọzọ na Storelọ Ahịa Play nke ị ga-achọta maka ibudata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa niile enwere ike ibudata na ụlọ ahịa Google.
Ihe ozo na enye anyi ohere budata ngwa ahụ na ngwa apk na-enweghị ịwụnye ya na gam akporo anyị, akụkụ karịrị ihe na-atọ ụtọ maka onye ọ bụla nke masịrị ịmegharị ngwa ma ọ bụ ọbụna ịnakọta ha iji wụnye ha n'oge ha chere na ha kwesịrị ekwesị.
Site n'ụzọ F-Droid bu ihe mmeghe ma obu oru Open Source, nke nwere ngwa nke aka ya maka gam akporo i nwere ike budata na otu uzo a.
Nkwado ọzọ m ga - eme bụ Apptoide, ngwa ọzọ ma ọ bụ ụlọ ahịa na Playlọ Ahịa Google, nke, dịka apk ahụ siri dị, bụ ngwa dị mma maka gam akporo anyị.
Nsogbu dị na ngwa a ma ọ bụ Ahịa ọzọ na Storelọ Ahịa Play, bụ na anyị nwere ike ịchọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla anyị na-achọ, ya bụ, site na Apptoide, na mgbakwunye na inwe ike ịchọta ngwa n'efu dị ka n'ahịa ndị ọzọ m kwuru, ebe a ma ọ bụrụ na anyị ga-achọta gbanwetụrụ ngwa na ụgwọ ngwa na egwuregwu na anyị ga-enwe ike ibudata n'efu.
Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka e mee ngwa ngwa Soro nkwenye nchedo nke m kpọtụrụ aha n'elu ka gam akporo anyị anaghị agba ụdị egwu ọ bụla ebe ọ bụ na anyị achọghị nke ahụ n'ihi mmejọ anyị bu oria ọ bụla nke malware.
Nwere ike ibudata Apptoide na njikọ a.
Mirror APK Ọ bụ otu n'ime ụlọ ahịa ndị ọzọ na Playlọ Ahịa Google Play nke m na-akwado taa enweghị ngwa nke aka ya maka gam akporo, na nke bụ eziokwu bụ na anyị agaghị achọ oke ebe ọ bụ site na imeghe Weebụ site na ihe nchọgharị kachasị amasị anyị na ịmepụta kpọmkwem ụzọ na desktọọpụ anyị ga-enwe ike iji ya dị ka a ga - asị na ọ bụ naanị ngwa ọzọ.
Ngwa site na ozugbo ibudata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa ọ bụla anyị nwere ike ịhụ na Storelọ Ahịa Play, ọbụna site na nke anyị ga-enwe ike ịchọta mmelite kachasị ọhụrụ, ndị na-erubeghị Storelọ Ahịa anyị, ma ọ bụ ngwa na ọnọdụ Beta ma ọ bụ Alfa na-enweghị mkpa ịdebanye aha maka mmemme beta beta nke Google Play Store.
Ọ bụrụ na nke a anyị tinye ya anyị nwere ike ibudata na ngwa ngwa na-enweghị ihe ọ bụla Na na anyị nwere ike ịchọta ngwa ndị ahụ na-adịghị na Storelọ Ahịa Play n'ihi mmachi ala ma ọ bụ mbido ọgba aghara, anyị nwere ike ikwu n'enweghị obi abụọ ọ bụla na anyị na-eche otu n'ime ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na Playlọ Ahịa Google Play na ọnọdụ gam akporo.
Nwere ike ịnweta APK Mirror ukara website na ịpị njikọ a.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, anyị na-akwado gị dị ka ụlọ ahịa ọzọ na Playlọ Ahịa Google, gọọmentị weebụsaịtị nke Malavida.com, ụlọ ahịa ọzọ, naanị otu n'ime ndụmọdụ ndị a taa, na Ọ bụ ndị mmepe nke asụsụ Spanish mepụtara ya kpamkpam, kpọmkwem otu ìgwè nke ụmụ nwoke ndị Valencian na-arụsi ọrụ ike.
Ike nke weebụsaịtị a ma ọ bụ nke ọzọ na Playlọ Ahịa Google, wepụ akụkụ nke imewe ya na ime ihe n'eziokwu nwere ike imeziwanye ọtụtụ, ekwesịrị ịdeba n'etiti ihe niile ike abụọ ebe ha dị; nke mbụ bụ ọsọ nke Web n'onwe ya na usoro nke igodo okwu na usoro ọsọ nke faịlụ apks anyị na-ebudata.
Dị ka nke abụọ na-adịchaghị mkpa, ọ bara uru ịkọwa mbọ ndị mmadụ a na-agba iji nweta ngwa ha na-anakọta na Ahịa ha ka ọ dị ugbu a. Mgbalị dị ukwuu nke Hazie mmelite site na mkpa, n'elu, wdg, wdg.
Na nkenke, dị mfe iji webụsaịtị nke anyị nwere ike ibudata ngwa na ngwa APK ka anyị wee ghara ịdabere na Playlọ Ahịa Google. Ọ bụrụ na ihichapụ ụlọ ahịa ngwa ma chọọ weghachite Storelọ Ahịa PlayWill ga-ahụ etu esi eme ya na njikọ nke anyị hapụrụ gị.
Ruo ebe a ị nọ 5 ndị ​​ọzọ na Google Play Store, ụfọdụ ahịa ndị ọzọ na vidiyo m hapụrụ na mmalite nke isiokwu a, m na-egosi gị n'ụzọ zuru oke yana ịnye gị ndụmọdụ dị mkpa maka iji ha mee ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » 5 Alternatives na Google Play Store
Ọhụrụ naanị Fortnite mkpọ bịara Samsung Galaxy